Vidiny ofisialy Apple Watch any Espana | Avy amin'ny mac aho
Vidiny ofisialy Apple Watch any Espana
Jesus Arjona Montalvo | | Apple Store, Apple Watch, About us
Efa manana ny fandefasana ny Apple Watch any Espana isika amin'ny onja faharoa amin'ny fizarana ny Apple Watch, araka ny nambarantsika omaly momba an'io lahatsoratra. Ny Apple Watch dia azo vidiana avy 7:01 maraina tany Espana. Ary entinay ho anao ny vidiny ofisialin'ny Apple Watch rehetra, toy ny sasany fehin. Resaka tsaho fotsiny ireo angon-drakitra ireo mandra-panolorana azy ireo, ary misy ny tsy fitoviana amin'ny firenena sasany, toy ny isaky ny famantaranandro mandeha foana lasa tsy.
Manana famantaranandro telo samihafa izahay, ny Apple Watch, Apple Watch Sport ary ny Apple Watch Edition, miaraka amin'ny famaranana samihafa. Ho fanampin'izany, ny diagonalin'ny famantaranandro koa dia misy akony amin'ny vidiny 38mm (1.32 santimetatra) na 42mm (1.5 santimetatra), ny fahasamihafana dia hita amin'ny sary etsy ambony. Amin'izany rehetra izany dia tsy maintsy ampiana isika raha te-fehy tadiavina. Raha tsy misy resaka intsony, eto dia manana ny vidiny ofisialy ianao.
Apple Watch Sport 38mm: avy amin'ny 419 euro.
Apple Watch Sport 42mm: avy amin'ny 469 euro.
Apple Watch 38mm: avy amin'ny 669 euro.
Apple Watch 42mm: avy amin'ny 719 euro.
Apple Watch Edition 38mm: avy amin'ny 11.200 euro.
Apple Watch Edition 42mm: amin'ny 13.200 euros.
Araka ny hitanao, raha ny momba ilay kinova fanatanjahan-tena amin'ny famantaranandro dia efa nisy fiakarana vidiny manomboka 399 euro ka hatramin'ny 419 euro raha ampitahaintsika amin'ny frantsay na alemana mpifanila vodirindrina amintsika izy. Amin'ny ambiny modely, dia nampiharina ihany koa ny fitomboana mifanaraka amin'izany.
Ny vidin'ny tady sasany, izay noresahinay tamin'ny fotoana maro, dia toa somary fohy ihany tarehy:
Tady fanatanjahan-tena: avy amin'ny 59 euro.
Milano Bracelet: avy amin'ny 169 euro.
Tady buckle kilasika: avy amin'ny 169 euro.
Tady Loop amin'ny hoditra: amin'ny 169 euros.
Tady buckle maoderina: 269 euro.
Rohy fehin-tànana: avy amin'ny 499 euro.
Ao amin'io rohy, Apple dia manana serivisy momba an'io, mety tsara raha handamina a fotoana amin'ny magazay ara-batana hijerena indray mandeha hoe iza no maodely mandresy lahatra indrindra noho ny habeny sy ny sehatry ny asa mahomby.
Ahoana ny fahitanao ny vidiny? Efa nanapa-kevitra ny hividy ny Apple Watch ve ianao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Apple Store » Vidiny ofisialy Apple Watch any Espana
Ny tena marina dia tena mora, hampiakariko kely kokoa.
Hividy iray amin'ireo andiany tsirairay aho, hariana daholo izy ireo ary maharitra sy maharitra ary maharitra ny bateria ……
Tsy hitako koa lafo
Avy eo dia lazain'izy ireo fa any Espana dia tsy mividy vokatra Apple toy ny any amin'ny firenen-kafa ianao. Ny kely indrindra dia mitovy ny vidiny! Samy manao amin'ny volany izay tadiaviny ny tsirairay, fa andao, miaraka amin'ireo endri-javatra vitsivitsy ananany anio sy ny bateria, dia toa fitaka izany amiko.
Chapapote dia hoy izy:
Mbola maitso dia maitso izy ity, mila ampitahanao amin'ny iPhone naharitra 3-4 taona vao tonga lafatra (manokana mandra-pahatongan'ny iPhone 4, efa tsara ny 3gs fa ny 4 no tonga lafatra) tsy hovidiko izao fa amin'ny taona vitsivitsy angamba Eny
Mamaly an'i Chapapote
Hiandry ny Apple Watch 2 aho amin'izany.
Ny vidiny isaky ny firenena dia tokony hapetraka araky ny fahefa-mividy, satria tsy azoko fa miaraka amin'ny karama mahamenatra ananantsika any Espana, dia mitentina mitovy na mihoatra noho ny firenena hafa izay andoavany vola be izany.
Roxio dia mandefa ny andiany 14 amin'ny fampiharana firaketana Toast malaza
OS X El Capitan Second Beta dia manambara vokatra vaovao roa